ऋचा र प्रियंकाको प्रेगनेन्सी गफ : सन्तानको नामदेखि सम्धिनी बन्नेसम्मका कुरा ! – Nepal Press
ऋचा र प्रियंकाको प्रेगनेन्सी गफ : सन्तानको नामदेखि सम्धिनी बन्नेसम्मका कुरा !
२०७८ वैशाख १९ गते १३:०४
काठमाडौं । संयोग नै भन्नुपर्छ- केही साताको फरकमा अभिनेत्रीद्धय प्रियंका कार्की र ऋचा शर्माले आफू गर्भवती भएको कुरा सार्वजनिक गरे । उनीहरुले सामाजिक संजालमा बेबी बम्पका तस्विर राखेर प्रशंसकमाझ सन्तानको पर्खाइमा रहेको बताए ।
यी दुई समकालिन एक्ट्रेसले हालै एक युट्युव टकसोमा गर्भवती अवस्था र फ्यामिली प्लानिङबारे गफगाफ गरेका छन् । प्रियंकाको युट्युव च्यानल चपचप डायरिजमा उनीहरुले ‘डबल बेबी बम्प’बारे गफ गरे ।
उनीहरुको भविष्यमा सम्धि–सम्धिनी’ बन्नेदेखि लिएर शिशुको नामाकरण गर्नेदेखि उनीहरुको रुचिसम्ममा केन्द्रित रहे । ‘के थाहा, भोलि हामी कतै सम्धिनी पनि बन्छौं कि’ प्रियंकाले भनिन्, ‘हो नि, उनीहरुको होमप्रोडक्सन बिनै सुपरस्टार पो बन्छन् कि ?’
ऋचाले आउने सन्तानको लागि नामहरुको लिस्ट आइपुगको बताइन् । ‘छोराछोरी जे भएपनि नाम मिनिङफुल होस्’ ऋचा भन्छिन्, ‘यो सुन्दर संयोग हो । केही हप्ताको अन्तरमा हामी ममी बन्दैछौं ।’
पहिलोपटक पे्रगनेन्सी परीक्षण पजेटिभ आउँदा आमालाई सम्झिएको ऋचाले सुनाइन् । ‘पजेटिभ आएपछि पहिलोपटक स्ट्रोङ फिलिङ भित्रैदेखि आउँदो रहेछ । केही किट्स लिएर राखेकी थिएँ । पजेटिभ देखिँदा सुरुमा विश्वास लागेन । भएपछि पहिलोपटक ममलाई मिस गरेँ । त्यसपछि हामी नाइस लन्चमा गयौं’ उनले सम्झिइन् ।
प्रियंकाले पनि आफूलाई पहिलोपटक ममी बन्ने थाहा पाउँदा युनिक खालको महसुस भएको बताइन् ।
#प्रियंका कार्की र ऋचा शर्मा
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १९ गते १३:०४